I-China I-100% ye-Bamboo Natural Renewable Cake Cutlery Production and Factory | IGianty
I-100% bamboo Yemvelo Engaguquki eyakhiwe kabusha
I-bamboo cutlery eyisisekelo se-bamboo iyindlela yokuqala futhi kuphela yemvelo yokulahla eyenziwe eyenziwe nge-bamboo eqinisekisiwe, evuselelekayo. Inhle futhi iqinile. Uhla lwe-cutlery yethu oluyi-100% luzolingana nanoma yimuphi umcimbi.
Ummese we-bamboo wenziwe nge-bamboo yemvelo emsulwa. I-bamboo izinto ezivuseleleka kakhulu emhlabeni. Kuvunwa futhi kwenziwa ubuciko ngokuzinza. Beka ukugcizelela ekujabuleni okungokwemvelo, ukunambitha kanye nesipiliyoni nge-bamboo cutlery yethu. Lezi zinwele ezihlotshiswe kahle zoqalo zihlala ngokunethezeka esandleni futhi zivumelana kahle naphambi kwephrezentheshini engenawo upulasitiki. Impahla yangempela yemathafa, emikhosini yokudla kanye nemicimbi, kumasayithi wekamu nangezikhathi zokudlela ezitolo namaphathi engadini. Hhayi kuphela ongasebenzisa ukudla i-ayisikhilimu, ikhekhe kepha futhi nokudla kwesitayela wasentshonalanga njenge-noodle nesaladi. Ukuzisika kwethu okuhle okungu-100% kungukukhetha okuhle kokuphela, imfashini nezemvelo.
I-Forest Stewardship Council (FSC), yinhlangano engenzi nzuzo ebeka izindinganiso ezithile eziphakeme ukwenza isiqiniseko sokuthi amahlathi enziwa ngendlela ebhekelela imvelo futhi enenzuzo emphakathini. Uma umkhiqizo ubhalwe ngokuthi "Okuqinisekisiwe kwe-FSC," kusho ukuthi izinkuni ezisetshenzisiwe kumkhiqizo kanye nomenzi wazo owenze wahlangabezana nezidingo zoMkhandlu Wokuqina Kwehlathi.
Isitifiketi se-FSC sithathwa njengokuqanjwa ngokuthi "igolide standard" njengezinkuni ezivunwa emahlathini ezilawulwa ngendlela efanele, ezinokuzuzisa umphakathi, eziqaphela imvelo, futhi ezisebenziseka kahle kwezomnotho.
• Kuqinisekiswe i-FSC
• Ngcono ngokwemvelo
• Izinto ezingavuselelwa
• Ukukhetha okuhle, okungabizi kakhulu, okuyi-eco-friendly ukusikeka kwepikiniki yakho elandelayo, ehhovisi noma ephathini yedili, umcimbi okhethekile, umshado, noma ikhefi lakho noma indawo yokudlela
• Ihlala kumquba wamakhompiyutha nasekhaya
• Biodegrade hhayi ukungcolisa noma ukulimaza imvelo
Into Bamboo Knife
Nqaba Inani 1%
Isibalo seCaton Ama-pcs ayi-1000
Izinto zephakethe ngalinye Ama-pcs ayi-100
Ipaka ibhokisi ngalinye Amaphakethe ayi-10
Usayizi weCarton 22 * 18 * 19cm
Into I-bamboo Fork
Usayizi weCarton 25 * 18 * 23cm
Into Isipuni se-bamboo
Usayizi weCarton 24 * 18 * 26cm
Esedlule: Ifektri ihlinzekwe nge-4 Piece Cutlery Set - I-CPLA Plast-free Sustainable Renewable Cutlery Kit - Isikhwama esinakho konke - iGianty
Olandelayo: I-Birchwood FSC Natural Renewable Cutleable Compleable
I-Birchwood FSC Sika i-Case Reableable compostable ...